Football Khabar » मेस्सीबारे रोनाल्डोका पाँच भनाइ, जसले आलोचकको सोच नै बदल्न सक्छ !
मेस्सीबारे रोनाल्डोका पाँच भनाइ, जसले आलोचकको सोच नै बदल्न सक्छ !
एजेन्सी, मंसिर २५
पोर्चुगलका फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो र अर्जेन्टिनाका फरवार्ड लिओनल मेस्सीबीच फुटबल जगतमा १५ वर्षदेखि प्रतिस्पर्धा छ । यो विभिन्न रूपमा देखिन्छ । खेल, उपाधि, अवार्ड, सफलता आदिमा । दुई खेलाडीमा आपसी प्रतिस्पर्धा जबर्जस्त पेचिलो हुँदै आएको छ, लामो समयदेखि । जुन अहिले पनि छँदैछ ।
त्योभन्दा बढी रोनाल्डो र मेस्सीका आ–आफ्ना (टिम) समर्थकले यी खेलाडीबीच झनै चर्को प्रतिस्पर्धा पैदा गराइदिएका छन् । गोल संख्यादेखि उपाधिसम्म यी दुई खेलाडीको प्रतिस्पर्धालाई लिएर १५ वर्षदेखि करोडौं फुटबल समर्थक विभाजित छन् । सामान्य ढंगले हेर्दा पनि रोनाल्डो र मेस्सीबीच बाहिर दृश्यमा व्यक्तिगत रूपमा ‘चर्को’ प्रतिस्पर्धा छ ।
रोनाल्डो र मेस्सीले विगतमा ला लिगामा ९ सिजन प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धी भएर खेले । त्यसअघि पनि च्याम्पियन्स लिगमा यी दुई खेलाडी एकअर्काविरुद्ध उत्रिएका थिए । सन् २०१८ मा यी दुई खेलाडीले अन्तिम पटक ला लिगामा खेलेयता दुई दिनअघि च्याम्पियन्स लिगमा पुनः भिडे । उनीहरूले ठीक २ वर्ष ७ महिनापछि एकअर्काको सामना गरे ।
फुटबल दुनियाँमा रोनाल्डो र मेस्सीबीच पेचिलो प्रतिस्र्धा देखिए पनि यी दुई खेलाडीले भने कहिल्यै पनि आफूहरूबीच प्रतिस्पर्धा नरहेको बताउँदै आएका छन् । यो कुरा रोनाल्डो र मेस्सी दुवैले सार्वजनिक रूपमै बताउँछन् । तर, समर्थक र मिडियाले यी दुई खेलाडीबीच जबर्जस्त चर्को प्रतिस्पर्धा चलाइरहेका छन्, जुन निकै तातो छ ।
करिअरको अन्तिम समयतिर रहेका इटालियन युभेन्टसका रोनाल्डोले भने मेस्सीसँग प्रतिस्पर्धा छ कि छैन भन्ने विषयमा धारणा राखेका छन् । दुई दिनअघि रोनाल्डोको टिम युभेन्टसले च्याम्पियन्स लिगमा बार्सिलोनाको घरमा मेस्सीको टिम बार्सिलोनालाई ०–३ ले हराएपछि मिडियासँग कुरा गर्दै रोनाल्डोले मेस्सीसँगको सम्बन्धबारे समय लिएर निकै खुलेर बोलेका छन् । क्याम्प नोउ रंगशालामा भएको खेलमा बार्सिलोनालाई ०–३ ले हराउनेक्रममा रोनाल्डोले २ पेनाल्टी गोल गर्दा आधा दर्जन त रेकर्ड नै पनि बनाए ।
खेलपछि मिडियासँग कुरा गर्दै रोनाल्डोले मेस्सीप्रति आफ्नो सधैं सम्मान रहेको मात्रै बताएनन्, मेस्सीलाई आफूले कहिल्यै पनि प्रतिस्पर्धीका रूपमा नहेरेको बताएका छन् । बाहिर मानिसले मेस्सी र आफूबीच दुश्मनीजस्तो अवस्था पैदा गराए पनि आफू र मेस्सीले एकअर्कालाई सधैं सम्मान गर्ने रोनाल्डोले बताए । सोक्रममा रोनाल्डोले मेस्सीको विषयमा राखेका केही भनाइ जस्तो तस्तै यहाँ छन्–
‘मेस्सीसँग मेरो सम्बन्ध निकै राम्रो छ । उनी मेरा दुश्मन हैनन् । मानिस र मिडियाले बाहिर के बताउँछन्, मलाई थाहा छैन । हामी दुवैले आफ्नो टोलीका लागि जे राम्रो हुन्छ, त्यो गर्न ध्यान दिन्छौं । हामीले सधैं एकअर्कालाई सम्मान गर्छौं । स्पेन र क्याटलुनिया फर्किनु मेरा लागि सधैं राम्रो हो । क्याम्प नोउमा खेल्न सधैं कठिन हुन्छ । र, बार्सिलोना मैले सामना गरेमध्ये एक उत्कृष्ट टोलीमा पर्छ ।’
‘म पनि मिडियाबाट थाहा पाउँछु, हाम्रो सम्बन्ध र प्रतिस्पर्धाबारे बाहिर धेरै चर्चा हुन्छ । मानिसले हामीबीच राम्रो सम्बन्ध छैन भन्ने बुझेका होलान् । तर, मैले लियोसँग सधैं सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाएँ । मैले उनीसँग १२, १३, वा १४ वर्ष अवार्ड समारोह सेयर गरेको छु । मैले उनलाई कहिल्यै पनि प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेरेको छैन । यदि तपाईंले लियोलाई गएर यही कुरा सोध्नु भयो भने उनले पनि सायद यही भन्नेछन् ।’
‘हामी यो जान्दछौं कि– फुटबलमा, मिडियामा देखाउन एक प्रतिस्पर्धीको माग हुने गर्छ । बाहिर यसैको चरित्र देखिएको हो । तर, हामीले त सधैं एकअर्काप्रति राम्रो व्यवहार गर्दै आएका छौं । हामी भेटिँदा सधैं बोल्छौं, केही संवाद गर्छौं, अंकमाल गर्छौं । सायद मप्रति उनको पनि धारणा मेरोभन्दा फरक छैन होला ।’
‘मैले बुझेको सत्य के हो भने, मलाई राम्रो बनाउन लियोले सघाएका छन् र उनलाई राम्रो बनाउन मैले सघाएको छ । हामीले एकअर्कालाई राम्रो बनाउन परोक्ष रूपमा सधैं काम गरेका छौं, फरक–फरक रूपमा । हामीले एकअर्काविरुद्ध आजसम्म ३५ पटकभन्दा बढी खेलिसकेका छौं । हार–जित, गोलका संख्या, उपाधिका संख्या र व्यक्तिगत अवार्डका संख्या त खेलका पक्ष नै हुन् । यीबाहेक हामीले दर्शक सा समर्थकहरूलाईसधैं रोमाञ्चकता दिँदै आयौं जस्तो लाग्छ । मलाई खुसी लाग्छ– हामीले एकअर्काविरुद्ध खेल्नु मिठो अवसर हो । सायद उनलाई पनि यी लाग्छ होला ।’
‘कसले कति उपाधि वा अवार्ड जित्यौं भन्ने कुरा सामान्य हो । जो खेलाडी पनि सधैं धेरैभन्दा धेरै जित्न चाहन्छ । म आज पनि जित्न चाहन्छु, लियो पनि अझै धेरै जित्न चाहन्छन् । यो त झनै सुन्दर कुरा हो नि ! हामीले कसले कति गोल हान्यौं, कसले कति उपाधि जित्यौं, कसले कति अवार्ड जित्यौं भन्ने कुरा गौण हुन् । मेरो विचारमा त हामीले १५ वर्षदेखि टप लेभलमा लगातार खेलिरहेका छौं, यो नै ठूलो कुरा हो । यी १५ वर्ष हामीले जसरी बितायौं र जे–जे प्राप्त गरेका छौं, भोलि कोही आएर यही काम गर्न धेरै कठिन हुनेछ ।’
प्रकाशित मिति २५ मंसिर २०७७, बिहीबार २०:१९